ဆိုင်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်း
သင်၏လိုင်စင်ရထားသောပစ္စည်းများကို (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) အသုံးပြုခြင်းသည်ဤသင်ကြားရေးအရင်းအမြစ်လိုင်စင် (ဤ“ လိုင်စင်”) တွင်ပါရှိသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်သည်။ ဤလိုင်စင်သည်သင်နှင့်လိုင်စင်ရပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်နှင့် The Reward Foundation တို့အကြားတရားဝင်ချုပ်နှောင်ထားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ လိုင်စင်ရပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤလိုင်စင်အောက်ရှိစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာပြီးလက်ခံရန်သင်အတည်ပြုသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီလိုင်စင်အောက်ရှိစည်းကမ်းချက်များကိုသေချာဖတ်ပါ။
1 ။ နိဒါန်း။
၁.၁ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ကူးယူနိုင်သောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များကိုရောင်းချခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုအုပ်ချုပ်ရမည်။ သူတို့ကအစသူတို့အားသင်တန်းပစ္စည်းများကိုနောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုမှုကိုဖုံးလွှမ်း။
၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အမှာစာမချမီသင့်အားဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများအားသင်၏သဘောတူညီမှုကိုပေးရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
၁.၃ ဤစာရွက်စာတမ်းသည်စားသုံးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ရရှိနိုင်သောမည်သည့်ပြဌာန်းချက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုမျှမထိခိုက်ပါ။
၁.၄ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒရှိနိုင်သည် ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုအားပေး.
၁.၅ ။ သင်ခန်းစာများအတွင်းရှိအကြောင်းအရာကိုလူအချို့ကန့်ကွက်နိုင်သည်ဟုသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဆကျဆံ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများမပြရန်ကျွန်ုပ်တို့မှကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအဆင့်များအားလုံးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘာသာစကားသည်ကလေးများဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာနှင့်ကိုက်ညီရန်ကျွန်ုပ်တို့သေချာအောင်လုပ်ထားပါသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်သင်ခန်းစာပြင်ဆင်မှုတွင်ဖြစ်စေ၊ ဖြန့်ဝေရာတွင်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်နိုင်သောမည်သည့်အဆင်မပြေမှု၊
၂.၁ ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများတွင် -
(က)“ ငါတို့” ဆိုသည်မှာစကော့တလန်၏ဥပဒေအရ SCO44948 နှင့်အတူပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် The Reward Foundation ကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ - Melting Pot၊ ၅ နှင်းဆီလမ်း၊ Edinburgh EH5 2PR, စကော့တလန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။ (နှင့်“ ငါတို့နှင့်“ ငါတို့” ကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသင့်သည်);
(ခ)“ သင်” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်သို့မဟုတ်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
(ဂ)“ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ” ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရရှိနိုင်သည့်သင်တန်းများကိုဆိုလိုသည်။
(d)“ သင်၏သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများ” ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှသင်ဝယ်ယူခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သင်အားအချိန်နှင့်အမျှရရှိနိုင်စေမည့်တိုးမြှင့်ထားသောသို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်ထားသောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများပါဝင်သည်။
(င)“ လိုင်စင်” ဆိုသည်မှာဤလိုင်စင်၏နိဒါန်းတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ နှင့်
(စ)“ လိုင်စင်ရပစ္စည်းများ” ဆိုသည်မှာဤလိုင်စင်အရအသုံးပြုရန်အတွက်လိုင်စင်ရရှိသူကသင့်အားပေးအပ်သည့်အနုပညာသို့မဟုတ်စာပေ၊ ရုပ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ လိုင်စင်ရသူဆိုသည်မှာစကော့တလန်၏ဥပဒေအရ SCO44948 နှင့်အတူပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော The Reward Foundation ကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ - Melting Pot၊ ၅ နှင်းဆီလမ်း၊ Edinburgh EH5 2PR, စကော့တလန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။
(ဆ)“ တစ် ဦး ချင်းလိုင်စင်” ဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး မှကိုယ်ပိုင်သင်ကြားမှုအတွက်ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အခမဲ့လက်ခံခြင်းအတွက်လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။ ၎င်းသည်အခြားလူများ၊ ကျောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျောင်းသို့လွှဲပြောင်းခြင်းကိုမခံရပါ။
(ဇ)“ လူမျိုးစုံအသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်” ဆိုသည်မှာပညာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန်ကော်ပိုရိတ်အသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ကျောင်းသို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှအခမဲ့သို့မဟုတ်အခမဲ့လက်ခံသည့်လိုင်စင်ဖြစ်သည်။
၃.၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုကြော်ငြာခြင်းသည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းထက်“ ဆက်ဆံရန်ဖိတ်ကြားခြင်း” ဖြစ်သည်။
၃.၂ သင်၏အမိန့်ကိုလက်ခံသည်အထိနှင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားမည်သည့်စာချုပ်သက်ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်ကိုဤပုဒ်မ 3.2 တွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီဖြစ်လိမ့်မည်။
၃.၃ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အခမဲ့ ၀ ယ်ယူနိုင်သောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှရယူရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။ သင် ၀ ယ်လိုသည့်သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်၏စျေးဝယ်ခြင်းတောင်းထဲသို့ထည့်ပြီး Checkout သို့သွားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဖောက်သည်အသစ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ လော့ဂ်အင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကဖောက်သည်များအတွက်ငွေစာရင်းသည်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသော်လည်းကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်များအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရှိပြီးသားဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်၏ login အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရမည်။ သင်ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့်ဤစာရွက်စာတမ်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုသင်သဘောတူရမည်။ သင်၏ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သင်ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်သင်အမိန့်အတည်ပြုချက်ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဤအချက်မှာသင်၏အမှာစာသည်ချုပ်နှောင်ခံရမည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အမိန့်ကိုမလိုက်နာနိုင်ကြောင်းအီးမေးလ်ဖြင့်အတည်ပြုပါမည်။
၄.၁ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ စျေးနှုန်းများကိုပေါင် ၀.၀၀ အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဆိုပါက၎င်းအတွက်ငွေမကောက်ခံရသော်လည်းလိုင်စင်ကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးမည်။
၄.၂ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းများအားအခါအားလျော်စွာပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကအာဏာသက်ရောက်ခဲ့သောစာချုပ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
၄.၃ ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောပမာဏအားလုံးသည် VAT ကိုသီးသန့်ဖော်ပြထားသည်။ ငါတို့က VAT မပေးပါဘူး
၄.၄ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဖော်ပြသည့်စျေးနှုန်းများသည်လိုင်စင်ဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်။
၄.၅ ကျောင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူလိုပါက၎င်းတို့သည် Multi-User လိုင်စင်ကို ၀ ယ်ရမည်။ ၎င်းသည်လိုင်စင်တစ်ခုစီ၏ ၃.၀ ဆကုန်ကျသည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုကျောင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌အသုံးပြုနိုင်ပြီးမည်သည့်ဆရာနှင့် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်မျှဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ ပစ္စည်းများကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းပါကကျောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းကိုယ်စားအခမဲ့ ၀ ယ်ယူသည့်ကိုယ်စားလှယ်သည် Reward Foundation နှင့် Reward Foundation အကြားသင့်လျော်သောဥပဒေရေးရာဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းသေချာစေရန်အသုံးပြုသူပေါင်းစုံလိုင်စင်ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်နေသေးသည်။ လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူ။
၅.၁ သင်ငွေရှင်းသည့်ကာလအတွင်းသင်မှာထားသည့်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းကိုသင်ပေးရမည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်စျေးနှုန်းသည်ရွေးချယ်ထားသောလိုင်စင်အမျိုးအစား၊ တစ် ဦး ချင်းလိုင်စင် (သို့) Multi-User လိုင်စင်အတွက်သင့်တော်သည်။
၅.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်အခါအားလျော်စွာသတ်မှတ်ထားသောခွင့်ပြုထားသောနည်းလမ်းများဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ PayPal မှတဆင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အဓိကချေးငွေနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်အားလုံးကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။
၆.၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံစံသို့မဟုတ်ပုံစံများဖြင့်သင်၏သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် download လုပ်ခွင့်ပြုသည့်အီးမေးလ်ကိုချက်ချင်းပေးပို့နိုင်သည်။
၆.၂ သင့်လျော်သောဈေးနှုန်းနှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုသင်ပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ကပုဒ်မ ၆.၃ ဖြင့်ခွင့်ပြုသောသင်၏သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ကမ္ဘာအနှံ့၊ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးသော၊ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ အခန်း ၆.၄ မှတားမြစ်ထားသည့်သင်၏သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မျှအသုံးမပြုရ။
၆.၃ သင်၏သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများ၏“ ခွင့်ပြုထားသောအသုံးပြုမှု” များမှာ -
(ခ) တစ် ဦး ချင်းလိုင်စင်များအတွက် - စာဖြင့်ရေးသားထားသည့်ဂရပ်ဖစ်သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ - သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာများကိုကွန်ပျူတာ၊ သုံးကွန်ပျူတာ၊ မှတ်စုစာအုပ်၊ အီလက်ထရောနစ်စာဖတ်သူများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊
(ဂ) သုံးစွဲသူပေါင်းစုံလိုင်စင်များအတွက် - စာဖြင့်ရေးသားထားသည့်ဂရပ်ဖစ်သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပတ်သက်သော - သင့်ကွန်ပျူတာစာအုပ်၊ ကွန်ပျူတာ၊ လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာ ၉ ခု၊ ebook ဖတ်သူများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ ;
()) တစ် ဦး ချင်းလိုင်စင်များအတွက် - အသံနှင့်ဗွီဒီယိုသင်တန်းပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ - သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာများကို desktop၊ laptop သို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ၊
(င) သုံးစွဲသူပေါင်းစုံလိုင်စင်များအတွက် - အသံနှင့်ဗွီဒီယိုသင်တန်းပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ - သင်ခန်းစာစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများကို Desktop ၉ ခု၊ လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ၊ ;
(စ) တစ် ဦး ချင်းလိုင်စင်များအတွက် - သင်၏ရေးသားထားသောသင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုမိတ္တူ ၂ ခုစီကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာပုံနှိပ်ပါ။
(ဆ) အသုံးပြုသူလိုင်စင်များအတွက် - သင်၏ရေးသားထားသောသင်တန်းစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုစီကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာပုံနှိပ် ၆ စောင်ပုံနှိပ်ပါ။ နှင့်
(ဇ) သင်ကြားရေးအတွက်လက်ကမ်းစာစောင်ပြုလုပ်ရန်လိုင်စင်များအတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ ဤကိစ္စများတွင် 1000 ကျောင်းသားကန့်သတ်သက်ဆိုင်ပါသည်။
၆.၄ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏“ တားမြစ်ထားသောအသုံးပြုမှု” များမှာ -
(က) မည်သည့်သင်တန်းအမျိုးအစား (သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို) ကိုမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုထုတ်ဝေခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ချထားခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ခွဲဝေခြင်း၊
(ခ) မည်သည့်သင်တန်းပစ္စည်းမဆို (သို့မဟုတ်ယင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ကိုဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောသို့မဟုတ်မည်သည့်လူတစ် ဦး ၏ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုမဆိုဥပဒေအရဖြစ်စေချိုးဖောက်ခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်အခြားကန့်ကွက်ခြင်းရှိသည့်နည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်း၊
(ဂ) ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အပြိုင်ဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေဖြစ်စေယှဉ်ပြိုင်ရန်မည်သည့်သင်တန်းပစ္စည်း (သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ နှင့်
()) မည်သည့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုမဆိုစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်း (သို့မဟုတ်ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းများ) ။ ဤအပိုင်းသည်သင်ခန်းစာများကို အခြေခံ၍ သင်ခန်းစာများပေးပို့ခြင်းကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဤအပိုင်း ၆.၄ တွင်မည်သည့်အရာကမှသင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သူ့ကိုမဆိုသက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်လုပ်ရပ်များအားတားမြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းမပြုပါ။
၆.၅ သင်၏သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်လိုအပ်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်များ၊ မီဒီယာစနစ်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုများကိုသင်ရရှိရန်သင့်အားအာမခံပါသည်။
၆.၇ မူပိုင်ခွင့်အသိပေးချက်များနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်သတိပေးချက်များကိုသင်မည်သည့်ဘာသာရပ်တွင်မဆိုသိမ်းဆည်းထားရမည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းမပြုရ။
၆.၈ ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များ၌သင့်အားပေးအပ်ထားသောအခွင့်အရေးများသည်သင့်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်သည်။ မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှထိုအခွင့်အရေးများကိုအသုံးမပြုရ။ Multi-User လိုင်စင်များအတွက်သင့်အားပေးအပ်ထားသောအခွင့်အရေးများသည်ဝယ်ယူသည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှထိုအခွင့်အရေးများကိုအသုံးမပြုရ။
၆.၉ ဤပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်မှာကျောင်းသား ၁၀၀၀ အားလိုင်စင်နှုန်းထား။
၆.၁၀ အကယ်၍ သင်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ပါကဤပုဒ်မ ၆ ပါလိုင်စင်သည်ထိုကဲ့သို့သောချိုးဖောက်မှုအပေါ်တွင်အလိုအလျောက်ရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်။
၆.၁၁ သင်ပိုင်သောသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ထားသောသက်ဆိုင်ရာသင်တန်းစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများအားလုံးကိုဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ဤအပိုင်း ၆ တွင်ဖော်ပြထားသောလိုင်စင်ကိုသင်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
၆.၁.၂ ဤပုဒ်မ ၆ အရလိုင်စင်သက်တမ်းကုန်သွားလျှင်၊ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများမှသင်၏ယခင်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများမိတ္တူများကိုသင့်ကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများမှအမြန်ဆုံးနှင့်သေသေချာချာဖျက်သိမ်းပြီး၊ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းရှိသက်ဆိုင်ရာသင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများ၏အခြားမိတ္တူများကိုဖျက်စီးပါ။
၇.၁ ဤအပိုင်း ၇ သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်သို့မဟုတ်စားသုံးသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းမှသာလျှင်၎င်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယာဉ်သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ပြင်ပတွင်လုံး ၀ သို့မဟုတ်အဓိကအားဖြင့်ဆောင်ရွက်သူတစ် ဦး အနေနှင့်ဖြစ်သည်။
(က) သင်၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတင်သွင်းပြီးမှစတင်ခြင်း၊ နှင့်
(ခ) ပုဒ်မ ၇.၃ နှင့်အညီစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့မှ ၁၄ ရက်အဆုံးတွင်အဆုံးသတ်ရမည်။ သင်၏ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်မပေးရန်သင်မလိုအပ်ပါ။
၇.၃ အပိုင်း ၇.၂ တွင်ဖော်ပြထားသောအချိန်ကာလမတိုင်မှီသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုစတင်သင်ကြားနိုင်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တန်းကာလများကုန်ပစ္စည်းများကိုထိုကာလမကုန်မီစတင်လုပ်ဆောင်ပါကပုဒ်မ ၇.၂ တွင်ဖော်ပြထားသောဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ကိုသင်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဟုသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
၇.၄ ဤအပိုင်း ၇ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အခြေခံအားဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်သို့မဟုတ်သဘောတူစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကိုရုပ်သိမ်းရန်သင် (နှုတ်ထွက်ရန်သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ရန်) ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးရမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်ရှင်းလင်းသောကြေညာချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရလျှင်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်စာမျက်နှာရှိ 'Orders' ခလုတ်ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုပြန်အမ်းရန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစတင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်းသတ်မှတ်ရက်ပြည့်မီရန်အတွက်၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းကာလသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုသင့်အားပေးပို့ရန်လုံလောက်ပါသည်။
၇.၅ ။ အကယ်၍ သင်သည်အမိန့်ကိုဤအပိုင်း ၇ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပယ်ဖျက်ပါကသင်သည်ထိုအမိန့်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်သောငွေပမာဏကိုအပြည့်အဝပြန်အမ်းပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမှာစာကိုဖြည့်ရန်ငွေမပေးလျှင်၊ ငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
၇.၆ သင်ငွေပေးချေရာတွင်အသုံးပြုသည့်နည်းတူသင်ငွေပြန်အမ်းပါမည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုငွေပြန်အမ်းခြင်းကြောင့်သင်မည်သည့်အခကြေးငွေမယူဆောင်ရပါ။
၇.၇ ဤအပိုင်းကိုဖော်ပြသည့်အခြေခံအားဖြင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင့်သင့်အားပြန်လည်ပေးဆပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ၊ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားသောနေ့မှ ၁၄ ရက်အတွင်းတွင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖျက်သိမ်းမှု၏။
၇.၈ ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံပြီးသဘောတူသည်နှင့်တပြိုင်နက်အသုံးမပြုတဲ့ downloads အားလုံးဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
(ခ) ဤစည်းကမ်းချက်များကိုသင်သဘောတူရန်အပြည့်အဝအခွင့်အာဏာ၊ နှင့်
(ဂ) သင်၏မှာကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောသတင်းအချက်အလက်မှန်သည်၊ တိကျသည်၊ ပြည့်စုံသည်၊ လက်ရှိနှင့်အလွဲမလွဲပါ။
(ဂ) သင်၏သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီမည်။ နှင့်
၈.၃ သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံချက်နှင့်ကိုယ်စားပြုမှုများအားလုံးကိုဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေနှင့်ပုဒ်မ ၉.၁ အရခွင့်ပြုထားသောအမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ အခြားအာမခံချက်များနှင့်ကိုယ်စားပြုမှုများအားလုံးကိုအတိအလင်းဖယ်ထုတ်ထားသည်။
(က) ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသေခြင်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်မှုအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊
(ဂ) တည်ဆဲဥပဒေအရခွင့်မပြုသည့်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုတာဝန်ယူမှုများကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
()) သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုနိုင်သောတာဝန်ယူမှုများကိုဖယ်ထုတ်ပြီး၊ အကယ်၍ သင်သည်စားသုံးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာ မှလွဲ၍ သင်၏စည်းမျဉ်းဥပဒေများအားဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များအရဖယ်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းမပြုပါ။
၉.၂ ဤအပိုင်း ၉ နှင့်အခြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်တာဝန်ယူမှု၏ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ချန်လှပ်မှုများ -
(က) ပုဒ်မ ၁၂.၁ ကိုပြဌာန်းရမည်။ နှင့်
(ခ) ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရပေါ်ပေါက်လာသောတာ ၀ န်များအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရသော်လည်းကောင်းဖော်ပြသည့်အတိုင်းအတာ မှလွဲ၍ ကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင်ပါ ၀ င်သောတာ ၀ န်ခံများ (ပေါ့ဆမှုအပါအ ၀ င်) နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြduty္ဌာန်းချက်များ၊ ဒီထဲမှာ။
၉.၄ အမြတ်ငွေ၊ ဝင်ငွေ၊ ဝင်ငွေ၊ အသုံးပြုမှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ မျှော်မှန်းထားသောငွေစုဆောင်းမှု၊ စီးပွားရေး၊ ကန်ထရိုက်များ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများသို့မဟုတ်စေတနာတို့အပါအ ၀ င်မည်သည့်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၉.၅ ဒေတာ၊ ဒေတာဘေ့စ်သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲများဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တာ ၀ န်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များအရစားသုံးသူအနေဖြင့်သင်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါကဤပုဒ်မ ၉.၅ သည်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
၉.၆ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားတာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များအရစားသုံးသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါကဤပုဒ်မ ၉.၆ သည်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
၉.၇ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရာရှိများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတာ ၀ န်များကိုကန့်သတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ဝင်စားကြောင်းလက်ခံပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ထိုအကျိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်။ ရှိခြင်း, သင်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု entity ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု; ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဆက်စပ်၍ သင်ခံစားရသည့်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကိုယ်တိုင်မည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုမျှယူဆောင်လာမည်မဟုတ်ဟုသင်သဘောတူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ရပ်များနှင့်ပျက်ကွက်မှုအတွက်သူ့ဟာသူ) ။
၉.၈ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရသင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်မည်သည့်စာချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားသည်မဆို၊
(က) £ 100.00; နှင့်
(ဂ) အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ငွေမပေးခဲ့ပါက ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်မည်သည့်စာချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားစုစုပေါင်းတာဝန်ယူမှုကိုပေါင် ၁.၀၀ ဖြင့်သတ်မှတ်မည်။
၁၀.၂ ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်အချိန်နောက်ပိုင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်များနှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချိန်မတိုင်မီပြုလုပ်ထားသောစာချုပ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
၁၁.၁ သင်သဘောတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ချက်များ၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများအရကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများနှင့် / သို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုအခြားနည်းဖြင့်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုသင်သဘောတူသည် - အကယ်၍ သင်သည်စားသုံးသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင့်အားအကျိုးပြုသောအာမခံချက်များကိုလျှော့ချရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒီသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများအောက်မှာ။
၁၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲသင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီသင်၏အခွင့်အရေးများနှင့် / သို့မဟုတ်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုအခြားနည်းဖြင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုရ။
၁၂.၂ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရစာချုပ်ပါပြany္ဌာန်းချက်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအားမည်သည့်စွန့်လွှတ်မှုမှမပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်အခြားပြbre္ဌာန်းချက်အားချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားစာချုပ်ပါပြany္ဌာန်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားထပ်မံဖယ်ရှားခြင်းအဖြစ်မှတ်ယူရမည်မဟုတ်ပါ။
၁၃.၁.၁ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုတရားရုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားအရည်အချင်းရှိသောအခွင့်အာဏာတစ်ခုမှတရား ၀ င်နှင့်ဥပဒေအရအတည်မပြုနိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထားရှိပါကအခြားပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်ဆက်လက်သက်ရောက်လိမ့်မည်။
၁၃.၂ ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော / သို့မဟုတ်အတည်မပြုနိုင်သောပြဌာန်းချက်များမှအချို့ကိုပယ်ဖျက်ပါကတရား ၀ င်သို့မဟုတ်လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ပါကထိုအစိတ်အပိုင်းကိုဖျက်ပစ်သည်ဟုမှတ်ယူပြီးကျန်အပိုင်းကိုဆက်လက်သက်ရောက်စေမည်။
၁၄.၁ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်ရှိစာချုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အကျိုးအတွက်နှင့်သင်အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကမှအကျိုးသက်ရောက်စေရန်သို့မဟုတ်ပြenfor္ဌာန်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
၁၅.၁ ပုဒ်မ ၉.၁ နှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ downloads များအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့၏ downloads များရောင်းချခြင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်၎င်းနှင့် download ရယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားရှိသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးဖြစ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ downloads များရောင်းချခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်၎င်း downloads များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသုံးပြုသည်။
၁၇.၁ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးတင်ပို့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုအသစ်ပြောင်းလျှင်သင်မူလသဘောတူခဲ့သောမူကွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မရှိတော့ပါ။ နောင်တွင်ရည်ညွှန်းရန်အတွက်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများမိတ္တူတစ်စောင်ကိုသိမ်းဆည်းရန်သင်အကြံပြုပါသည်။
၁၇.၂ ဤစည်းကမ်းချက်များကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ GTranslate ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရရှိနိုင်သော်လည်းထိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများ၏ဘာသာပြန်အရည်အသွေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူကွဲသည်တရားဝင်အသုံးပြုနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောမူကွဲဖြစ်သည်။
၁၇.၃ ကျွန်ုပ်တို့သည် VAT အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါ။
၁၇.၄ ဥရောပသမဂ္ဂ၏အွန်လိုင်းအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမှုပလက်ဖောင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည် https://webgate.ec.europa.eu/odr/main။ အွန်လိုင်းအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမှုပလက်ဖောင်းကိုအငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၁၈.၁ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို The Reward Foundation မှပိုင်ဆိုင်သည်။
၁၈.၂ ကျွန်ုပ်တို့သည်စကော့တလန်၌ကုမ္မဏီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် SCO 18.2 အောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ပုံတင်ရုံးသည် The Melting Pot၊ Edgeburgh 44948 Rose Street၊ EH5 2PR, UK၊.
၁၈.၃ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ The Melting Pot၊ Rose Rose လမ်း၊ Edinburgh၊ EH18.3 5PR, Scotland, UK တွင်ဖြစ်သည်။
(က) အထက်ပါစာတိုက်လိပ်စာကို အသုံးပြု၍ စာတိုက်ဖြင့်၊
(ခ) ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်း https://rewardfoundation.org/contact/;
(ဂ) တယ်လီဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အခါအားလျော်စွာထုတ်ဝေသောဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်၊ သို့မဟုတ်
(d) အီးမေးလ်ဖြင့်သုံးခြင်း contact@rewardfoundation.org.
ဗားရှင်း - ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၀ ။